EZONA ZI-5 ZEEFREYTHI EZIPHAMBILI NGO-2021-MUSA UKUYITHENGA NGAPHAMBI KOKUFUNDA OKU! - IZIXHOBO
Iinqwelo ezi-5 eziPhambili zeFillet ngo-2021
Xa kufikwa kwimingxunya yefillets, ngokuqinisekileyo ayizizo zonke ezenziweyo zilinganayo… kwaye ayisiyonto imbi leyo! Imela yefreyithi ekumgangatho ophezulu yenye yezona zixhobo zibalulekileyo ekufuneka ubenazo kwaye kubalulekile kuwo wonke umntu ukusuka kubathandi beentlanzi kunye nabazingeli ukuya kubapheki basekhaya.
umnqamlezo ngetattoo yamaphiko engelosi
Kukho iintlobo ngeentlobo zeemfele zeemela ngaphakathi kudidi olusebenza ngcono ekugcwaliseni iintlobo ezithile zenyama. Ukusuka kwezo zisebenza kakuhle kwintlanzi ukuya kweyona ifreyim imbi yeefama, uyilo olwahlukileyo kunye neempawu zemela nganye inquma eyona ndlela yokuyisebenzisa.
Iimela zeefilthi lukhetho oluthandwayo kusetyenziso oluninzi olwahlukileyo kwaye ngaphandle kokuduma kwayo kunye nokusetyenziselwa injongo yalo, imela yefelethi ayisiyokugcwalisa nokulungiselela iintlanzi kuphela!
Nazi ezinye zezona zikhetho ziphakamileyo zeemflethi ezijikeleze yonke into, kunye nezinye ezenzelwe ngokukodwa uhlobo oluthile lokulungiselela.
• # 1 Eyona igqwesileyo - I-KastKing Fillet Imela -Isixhobo sefreyim esinobuchule kodwa esirhabaxa sibonelela ngobukhulu obahlukeneyo, ubhetyebhetye, isitshixo esibukhali, i-blade egcina umda wayo, kwaye ikhululekile ukuyisebenzisa, iyenza ukuba ibe yeyona nto siyithandayo.
• Eyona ilungele iSalmon- Intlanzi yaseRapala 'N yeFillet Knife enesingxobo -I-tang epheleleyo ye-6-intshi yentsimbi kunye nenqanaba elinye lokuloba zizinto ezifanelekileyo zokugcwalisa i-salmon okanye intlanzi oyithandayo ekuhambeni, eqinisekisa ukusika okubukhali, okuchanekileyo ngexesha ngalinye.
• Eyona ilungele inyama - Isiko laseChicago Cutlery Walnut 7.5 Slicer / Knife Knife -Yenza umsebenzi olula kwanezona nyama zinzima kunye ne-7 ½ ikhabhoni ephezulu yefelethi engenazingcingo ehambisa ukusika ngokuchanekileyo ukufikelela kwizithuba ezixineneyo xa kufakwa.
Iimela eziPhambili eziPhambili
1.IKastKing Fillet Knife
I-KastKing professional knives ziyathandwa ngabo bayaziyo indlela yabo ejikeleze ikhitshi kunye nendawo yokuzingela! Ezi zitshixo zomgangatho ophezulu zifumaneka nge-6, 7 kunye ne-9 ngee-blade ezingenagwele ezilungeleyo ukwenza umsebenzi… kwaye kakuhle.
I-KastKing Fillet Knife ibonelela ngendawo eyahlukileyo, eguquguqukayo yokugcwalisa ngokugqibeleleyo iintlanzi, inyama yenyama kunye nokukhawulezisa ukulungisa nakuphi na ukutya. Le blade ibukhali emnyama igqityiwe ngemela ine-G4116 yaseJamani intsimbi engenasici engenazintsimbi egcina umda wayo nakwizicelo zamanzi anetyuwa, ukulungiselela ukubonwa ngokulula kunye nokugcwaliswa.
Okubandakanyiweyo okungagungqi kwemela yesikhonkwane yibhonasi eyongeziweyo kwaye inceda ukugcina blade ikhuselekile kwaye ikulungele ukufezekisa malunga nawuphi na umsebenzi wokupheka ngokulula. Le thawuli irhabaxa yenza nawuphi na umsebenzi ukuba wenziwe kwaye ikulungele ukusebenzisa!
2. IMercer Culinary M23860 Millennia 8-Inch Ifilimu emxinwa
Yenziwe ngesiqwenga esinye sekhabhoni yentsimbi ephezulu yaseJapan, le blade yesitshixo ebukhali yenzelwe ukomelela nokuzinzileyo. I-blade yayo ebukhali, enobukhali yenza ukugcwalisa kunye nokusika ngokukhawuleza kwaye kube lula ngelixa isiphatho se-ergonomic sinika intuthuzelo enkulu.
Isinyithi esingumgangatho ophezulu seJapan sentsimbi sithetha ulondolozo olulula kwaye akukho rusi okanye umbala kumanzi okanye kulwelo. Yakhelwe kwiimpawu zokhuselo ezinje ngamanqaku eminwe ebunjiweyo yokuchasana nesiliphu kunye nonogada weminwe okhuselayo kukukhusela njengoko ugcwalisa ukubamba kwakho.
Yiphakamisele phezulu ngesatifikethi se-NSF esibonisa ukuba imela ihlolwe ngokungqongqo kwaye yaqinisekiswa kwaye yahlangabezana nemigangatho yayo yokhuseleko, umgangatho kunye nokusebenza, kwaye iMercer Culinary M23860 Millennia 8-Inch Narrow Fillet Knife yinto enkulu yokwenza imela ingqokelela yakho.
Yenziwe eJamani, J.A. IHenckels inegama lokwenza iimela ezisemgangathweni, kunye neZwilling J.A. I-Henckels Professional S ye-7-intshi yeFillet Knife ayikho ngaphandle. Iimela zeHenckels Professional S ziyilelwe abapheki ababalulekileyo kwaye zenziwe ngentsimbi ekhethekileyo yefomula abayisebenzisileyo ngaphezulu kweminyaka engama-280.
Ukuchaneka-okwenziwe ngesiqwenga esinye sentsimbi, le rivet yokubamba imela yesandla igqityiwe ngesandla ngamagcisa anobuchule, angamakhosi ekwenzeni umda olawulwa yi-laser yentsimbi ebukhali ebukhali, ene-bolster eyomeleleyo ukuyigcina ilinganisiwe kwaye sebenza njengomgcini weminwe. Le fomyula izalisiweyo kwaye iyinyani idityaniswe nenkqubo yokuqinisa umkhenkce kaZwilling, inika le thambo yefilti eyaziwayo yomelele ngakumbi kwaye igcine ikhaba libukhali ixesha elide.
4. I-Rapala Fish 'N yeFillet Knife ene-Sheath
Isixhobo esifanelekileyo salo naluphi na uhambo lokuloba okanye ukulungiselela umthendeleko wokupheka, iRipala Fish 'N yeFillet Knife neSheath ikuvumela ukuba uzalise iintlanzi okanye ulungiselele inyama yokupheka ngokukhawuleza. I-tang epheleleyo (ethetha ukuba i-blade iqhuba lonke ubude bokubamba i-birch), i-stainless steel-intshi ye-intshi ye-intshi yomelele kwaye yomelele, ngelixa i-single-stage-sharpener igcina i-blade ilungele ukusetyenziswa okuhlala ixesha elide.
Yiyise naphi na apho uya khona ngokukhuselekileyo kunye nesikhumba esingaphakathi kwesikhumba kwaye ulungele ukucoca, ukufakela, okanye ukulungisa nayiphi na into oyibambisayo naphina. I-Rapala Fish 'N yeFillet Knife ilungele ukuzalisa iintlanzi ekhitshini lakho lasekhaya okanye ngaselunxwemeni kwinkampu yakho esecaleni lomlambo!
5. Isiko laseChicago Cutlery Walnut 7.5 iSlicer / iFillet Knife
IChicago Cutlery, eyaziwa kwihlabathi liphela njengabenzi beemela ezicikizekileyo, ibonelela ngeChicago Cutlery Walnut Tradition 7.5 Slicer / Fillet Knife, eyenza umsebenzi olula wezona nyama zinzima ukuzifaka.
Imela ye-7-fillet ine-blade blade, eyilelwe ngokufanelekileyo ukusika ngokuchanekileyo kunye nokufikelela kwizithuba ezixineneyo xa kufakwa. Xa ubhangqiwe ngentsimbi engenasiphelo yekhabhoni engenanto inika amandla okusika agqithisileyo, iChicago Cutlery Walnut Tradition 7.5 Slicer / Fillet Knife iyalukhuphisana ngokulula.
Ayisiyiyo kuphela ibala elinokumelana nebala elingenakudla okanye umngxunya, kodwa ikwanazo neerivesi zobhedu eziphindwe kathathu kwisiphatho esine-intuthuzelo yokhuseleko olongezelelekileyo kunye nozinzo. Abo bakuthandayo ukusikwa ngokuchanekileyo ngelixa kufakwa ezona nooks zinzima kunye neentlanzi kwintlanzi nakwinyama baya kuyivuyela le thayile yefreythi evela eChicago Cutlery.
Ukukhetha iFillet Knife
Kukho iindlela ezininzi ezikhoyo namhlanje xa kuziwa ekukhetheni isipa efanelekileyo yefayile kubandakanya uyilo, ubungakanani, iblade, izinto zokwenza imveliso kunye nomgangatho. Kubalulekile ukuba ukhethe imela efanelekileyo ye-fillet kwiimfuno zakho, njengoko imela engalunganga inokubangela ukuba uchithe inyama exabisekileyo, ucothise ukucoca kunye nemisebenzi yokulungiselela, kwaye wandise umngcipheko wokulimala ngelixa ugcwalisa ukubamba kwakho.
Kwakhona, qiniseka ukuba ujonge imela yefayile enesiphatho se-ergonomic esiya kukhululeka esandleni sakho ngelixa ikunika amandla afanelekileyo okulawula ikhaba kwaye ugcine ukubambelela ngokuqinileyo, ekunokuba nzima kwezinye iimela xa izandla zakho zimanzi . Ayisiyomfuneko kuphela ukubambelela okuqinileyo, okunethezekayo okunika ukhuseleko kumsebenzisi, kodwa kunciphisa ubunzima obungafunekiyo ngelixa ucoca kwaye ugcwalisa inyama.
Isaliti ebandakanyiweyo yokukhusela ibhloko kunye nomphathi uhlala edibanisa xa ukhetha imela yefillet. Abo bane-sharpener eyakhelweyo bayanceda ngakumbi, kuba ikuvumela ukuba wenze ngokukhawuleza ngokukhawuleza ngelixa ulungiselela ukubamba, kungabikho mfuneko yokumisa kunye nokukhangela i-sharpener ukuze wenze umsebenzi.
Kwakhona, okuphawuleka kukukhetha okukhulayo kwisingxobo semela, enokuhluka ngemveliso kunye nomenzi. Khangela abo banomtya oqhelekileyo webhanti, kunye neziqeshana eziphathekayo kunye ne-loop attachments kwiibhegi, kunye neepokotshi zokugcina, njengoko ezo zinto zinokufumaneka ngokufanelekileyo kubasebenzisi abahlukahlukeneyo, ngakumbi xa bephuma ebaleni.
Ngokhetho olubanzi lweentlobo zeemfele ezifumanekayo namhlanje, kulula ukuyifumana isebenza ngokugqibeleleyo ngomsebenzi wakho, inempawu ezifunekayo ukwenza umsebenzi olungileyo, kwaye ilungile kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho. Nazi ezinye iingcebiso zokukunceda ukhethe imela efanelekileyo yeflet.
Iingcebiso malunga nokukhetha iFillet Knife
• Iblade - Olunye lolona khetho lubalulekileyo xa ukhetha imela yefilitha ngokucacileyo yicala. Khetha ibala elincinci nelomeleleyo kunye nokuguquguquka kokusebenzisa. Kuya kufuneka ibambe umda obukhali kwaye ibe bubude obulungileyo benyama okanye intlanzi oceba ukuyicoca.
• Phatha -Ungakujongeli phantsi ukubaluleka kwesiphatho semela yakho xa usenza ukhetho lwakho. Khetha isiphatho se-ergonomic ngesilinganisi esifanelekileyo esivumela ukuba ube nakho ukulawula ikhaba. Ukhuseleko kunye nokuthuthuzela zizinto eziphambili ekufuneka uzifune kwimela elungileyo.
• Isingxobo - Ngelixa ingeyonxalenye yokwenene yesipaji se-fillet, i-sheath yinto ebaluleke kakhulu, njengoko ikhusela ibhleyi kwaye ikugcina wena nabanye nikhuselekile ngexesha lothutho. I-Sheaths iza nezinto ezahlukeneyo ezinje ngesikhumba, inayiloni kunye neplastiki.
Nokuba loluphi uhlobo lulungile, kodwa abo banezinto ezibukhali ezakhelwe ngaphakathi bafumana amanqaku ongezelelweyo. Ukongeza, qiniseka ukuba unikele ingqalelo kukhetho olukhulayo lwefreythi yesikhwama sokuqinisekisa ukuba inezinto ozikhethayo, ezinje ngokubhinca ibhanti okanye iihaksi ezongezelelweyo zokudibanisa ukuwisa iibhokisi, njl.
Nokuba yeyiphi na inyama ofuna ukuyifaka, kukho imela efanelekileyo kulomsebenzi. Ngapha koko, licebo elilungileyo lokuba neemela ezimbini okanye ezintathu zefillet ezinobude obahlukeneyo beempawu kunye neempawu, ke ulungele nawuphi na umsitho.
Nje ukuba ufumane isitshetshe esifanelekileyo sefayile, kuya kuba nzima ukusebenza ekhitshini ngaphandle kwayo!
Ukuba awunabunewunewu bokufumana uninzi lwezi thambo zeemfele ezimangalisayo kwaye kuya kufuneka ukhethe imela enye yefelethi kwimisebenzi yakho, I-KastKing Fillet Imela yingcali kodwa irhabaxa kwaye iza ngobukhulu obahlukeneyo, kwaye inikezela ukuzinza kunye nokuchaneka okufunekayo ukuze kwenziwe umsebenzi ogqibeleleyo wefillet ngalo lonke ixesha!
inyanga enelanga kunye neenkwenkwezi ezinentsingiselo
ukakayi kunye noyilo lwe tattoo
Utshintsho lokungena kwethayile kumgangatho weenkuni
Iitatto zangasese zamagxa abafana
iinwele zamadoda zokubonakala zincinci kuma-50